Cabasho ka gudbin adeeg qaldan | Hallå konsument – Konsumentverket
Start/otherlanguages/other-languages/Other languages/so/somaliska/Soomaali/so/articles/cabasho-ka-gudbin-adeeg-qaldan/Cabasho ka gudbin adeeg qaldan
Cabasho ka gudbin adeeg qaldan
Reklamera felaktig tjänst - Somaliska
Cabasho ka gudbini waxa ay ka dhigan tahay in aad adigu la xariiraysid shirkadda si aad uga dacwooto qalad adeega ah. Waxaad u haysataa ugu yaraan sadax sano in aad ka dacwooto qalad.
Adeegyada ku jiri kara sharciga adeega macaamiisha
Warbixintaani waxa ay qusaysaa adeegyada ku jiri kara sharciga adeega macaamiisha. Sharcigu wuxuu quseeyaa:
Shaqada alaabta guurta. Tusaale dayactirka baabuur ama tv.
Shaqada alaabta ma guurtada ah, guryaha iyo dhismooyinka kale ee ku yaal dhul ama biyo dhexdood ama waxyaalaha kale ee aan guurin. Tusaale dayactirka guriga ama shaqo rinjiyayn ah.
Xaraynta alaabta guurta. Tusaale maqaasiin gelinta qalabka guryaha ama xaraaynta doon.
Sharcigu ma quseeyo daaweynta xayawaanada iyo dadka, tusaale adeegyada timo jare ama adeegyada daaweynta xoolaha. Ma quseeyo iyadana howl rarid ah, tusaale rarka alaabta guri.
Goormee ayuu adeegu yahay mid qaladan?
Adeeg waxa loo arki karaa mid qaldan hadii natiijadu u dhigmin midda aad adiga iyo shirkaddu ku heshiiseen. Waxay kaloo tahay hadii shaqada aan si dhab ah loo fulin, tusaale tusaaale hadii shaqada six un loo sameeyey ama ay jiraan daldaloolo. In shaqada si dhab ah loo fuliyo waxay ka dhigan tahay in natiijadu ay u dhiganto midda laga filayo qof xirfadale aha aqoon dhabna ah. Waa in aad adigu u qaadan kartaa in shirkaddu raacayso nidaamka iyo talooyinka ka jira qayta ay ka shaqaynaayso.
Waqti sidaa u dheer ayaad haysataa inaad ka dacwooto qalad
Waqti inta aad haysato oo aad kaga dacwooto khalad waxa ay ku xiran tahay nooca adeega aad iibsatay. Waxyaalaha ku saasab adeega xaraynta ama shaqada alaabta guurta waxa ad haysataa ilaa sadax sano in aad kaga dacwooto qalad. Adeegyada xaraynta waxa loola jeedaa tusaale maarka aad lacag ku siinaysid shirkad in ay maqaasiin kuu dhigaan alaabtaada. Shaqada alaabta guurta waxaa ay noqon karaan sida samaynta-, daayactiradda iyo shaqada nadiifinta, tusaale dayactir iyo samayn baabuur.
Shaqada dhul, dhismo, iyo wixii kale oo ma guurto ah waxa aad xaq u leedahay in aad kaga dacwooto ilaa toban sano. Tusaale shaqooyinkaas oo kale waa saqaf bedelid, biyodhaafin, iyo rinjiyeyn.
U dacwoo sida kuugu dhaqsiyaha badan aad dareento qaladka, ugu danbeeyn laba bilood gudahood
Waa inaad adigu ka dacwootoqaladka muddo macquula gudaheeda laga bilaabo maarkaad ogaatay qaladka iyo ilaa xiligii ay ahayd in aad ogaato qaladka. Hadii aad kaga dacwooto laba bilood gudahooda waxa loo tirinayaa muddo macquul ah. Hadii aad sugto mddo dheer in aad dacwooto waxa aad dhuminaysaa fursadda in shirkaddu ay saxdo qaladka.
Maxaad ka dalbikaraysaa shirkadda marka qalad dhaco?
Sharciga adeega macaamiisha ayaa xukumaya shurrdaha aad saari karaysid.
Gacanta koowaad: in shirkaddu wax ka qabato qaladka
Waxa aad marka hore ku xiri kartaa in shirkaddu saxdo qaladka si kharash la’aan ah. Waxa aad xaq u leedahay in aad hesho natiijadii aad adiga iyo shirkadda aad ku heshiiseen. In kharash la’aan la sameeyo waxa ay ka dhigan tahay in shirkaddu qabto dhamaan kharashaadka ku kacaya in qaladkii wax laga qabto- tusaale qalab, safar iyo shaqo.
Gacanta labaad:in aad adigu hesho qiimo dhimis
Qiimo dhimistu waa in ay u dhigantaa qaladka, tusaale waxa uu kharashu noqonayo hadii qaladka ay shirkadd kale wax ka qabato.
Gacanta sadaxaad: in aad adigu tuurto iibka
Tuuris heshiiska ah waxa ay ka dhigan tahay in la joojiyo shaqadii, oo aaysan waajib kugu ahayn in aad bixiso adeega. Shirkaduna ma saarna waajibka ah in ay dhamaystirto shaqada.
Bedelsiin qaladka aawgii
Shirkadda ayaa qabta kharaashdka jira ama dhaqaale dhumista adiga ku gashay qaladka awgiis. Tusaale waxa uu noqon karaa :
Dhumin daqli, tusaale hadii aay ahayd in aad fasax ka qaadato shaqdii si aad ula fiiriso qaladkii shirkadda si wadajir ah.
Kharash ku saabsan cadayn ka timid ninka soo kormeerayay ama qof kale oo aqoon u leh ( hadii loo baahday in la soo cadeeyo qaladkii)
Ka fikir waa kharashka dhabta ah waxa aad bedel ahaan u dalban kartid, ma aha dhibta iyo waqtiga aad gelisay cabashada. Waxaad u baahan tahay in aad muujiso gundhigga kharashaadka ku galay, kharashkuna ahaado mid suurta gal ah oo si toosa ugu xiran qaladka. Cadayn waxa ay tusaale ahaan noqon kartaa warqadda lacag bixinta, qaan sheegato ama cadayn.
Xaqqa celinta lacag bixin
Hadii adeegu yahay qalad waxa aad xaq u leedahay sida sharciga ah in aad celiso qayb ahaan ama lacag bixinta dhamaanteedsi badbaado ahaana. Waxa ay noqonaysaa qalab ku cadaadin ka dhan ah shirkadda adigana bed qab kuu ah.
Qaybta lacag bixinta aad celisay waa in ay u dhigantaa qaladka. Mabda’ ahaan waxay ka dhigan tahay in aad celinayso cadad daboolaya kharashka in shirkad kale loo yeero si qaladka wax looga qabto. Mararka qaar waxa ku saacidaya in aad la xariirto shirkado kale oo ku jira qaybta si aad u hesho qiimaha waxa ay ku kacayso in wax laga qabto qaladka.
Waa muhiim in aad shirkadda si qoraal ah aad ku wargeliso in aad celisay lacag bixintii iyo sababta. Waxa aad tusaale ahaan u diri kartaa e-mayl ama fariin qoraaleed sms.
Hadii shirkaddu sababto dhaawacyo
Sida uu qabo sharciga adeega macaamiisha waxa aad xaq u leedahay ka dalbashada magdhow shirkadda hadii ay sababaan dhaawacyo la xariirta in adeega la fuliyay. Waxa ay noqon kartaa hadii qalabka lagu samaynayo adeega uu dhaawacmo, tusaale ahaan hadii shirkadda aad ku aamintay inay ka bedelaan lugaha gaarigaay fiiqid ku sameeyaan dahaarka. Waxa kale oo ay noqon kartaa xitaa hadii shirkaddu dhaawacdo wax kale oo hantidaada ka mid ah, tusaale ahaan, tusaale hadii shirkadda aad ku aaminta dayactirka bumbada kulaylka ay ka dhacaan qalab kadibna dhaawac soo gaaro dhulka.
Diiwaan geli qaladka
Markaad aragto khalad ama dhinnaanshiyo waa muhiim in aad diiwaan geliso qaladka. Si ahaan waxa aad ugu baahan tahay in aad ugu cadayso shirkadda waxa aad u aragto in uu yahay qalad, si ahaana diiwaan gelintu waxay noqonaysaa muhiim hadii adiga iyo shirkadda aad ku raaci waysaan qaladka.
Waxa aad qaladka u diiwaan gelin karta in aad sawir ka qaado ama filin ka duubto. Ka fikir in tayadoodu loo baahan yahay inay aad u fiicnaadaan si qaladka loo arki karo. Haadii aysan jirin si fiican oo loo diiwaan geli karo qaladka waxad u sharixi kartaa qaladka marka aad u dacwoonaysid shirkadda.
La xariir shirkadda oo ka codso in qaladka wax laga qabto
Kadib marka aad aragto qalad waa muhiim in aad sida kuugu dhaqsiyaha badan ula xariirtid shirkada si aad usiisid fursad ay ku baaraan waxna uga qabtaan qaladka.Waa wax iska caadiya in shirkadu u baahato in ay soo baxdo oo aay aragto qaladka si ay go’aan uga qaadato waxa loo baahan yahay in la sameeyo. Malaha waxa aan cadayn waxa sababay qaladka.
Adigu uma baahnid in aad ogaato waxa sababay qaladka marka aad lasoo xariiraysid shirkadda,tan muhiimka ahi waa in aad sida ugu suurta galsan dhaqsiyo badan aad far fiiqdo in aad aragtay qalad. Taas bedelkeeda waxa adiga kugu waaajib noqonaysa in aad u gudo shirkaadda hadii uu baaritaanku muujiyo in qaladku uusan sababin shaqadooda.
Waa fiican tahay mar walba lin a haysto gundhig qoraal ah oo muujinaya in aad lasoo xariirtay shirkada si aad u soo dacwooto. Hadii aad u haysato fursad waxa sidaas daraadeed fiican in aad usoo dirto sms ama mayl. Kadibna waxaad kusoo lifaaqi kartaa gundhig muujinaya qaladka, tusaale sawiro.
Hadii adiga iyo shirkadda aydaan isku raacin
Hadii aad u baahan tahay wadohagid waxa aad la xariiri kartaa Hallå macaamiil . waxa aan nahay adeeg iftiinin ah oo wadanka oo dhan ah kuna siin kartaa warbixin ku saabsan xaquuqdaada iyo waxyaalaha aad kala dooran karto sida aad horey ugu socoto. Waxa aan ku siinaaynaa wado hagid aan meelna ku xirnayn oo midaas darteed ma qiimaynayno arinkaada kuu gaarka, xalino muran ama aan shirkadda kuula xariirno.
Kaa aqri sida wargelin loo sameeyo bogga ARNExtern länk